Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharxayaa siyaabaha xogta iyo macluumaadka shakhsi ahaaneed loo ururiyo oo loo isticmaalo marka la booqanayo bogga shabakadda Ciyaaraha.org.
Markaad isticmaasho browser si aad u booqato ciyaaraha.org, macluumaad dhowr ah ayaa laga yaabaa in loo soo diro shabakadaada internetka. Waxaa ka mid ah, waxyaabaha soo socda waxaa laga yaabaa in ay noo by:
Cinwaanka IP - Tani waa code ah oo ka kooban 4 lambarada 0 ilaa 255, wada qaybsamaan iyadoo la isticmaalayo dhibco (sida aa.bb.c.dd, halkaas oo aa, BB, cc iyo bd yihiin lambarada hore loo soo sheegey). Mid ka mid ah IP ayaa caadi ahaan la xidhiidha hal kombuyuutar oo kaliya kaas oo ku xiran internetka. Si kastaba ha ahaatee, teknoolajiyada dhawaan (server wakiil, iwm) waxay suurto gelisay in la wadaajiyo mid ka mid ah daraasiin IP kombiyuutarada, kuwaas oo dhammaantood online yihiin. Waxa kale oo suurtagal ah in aad soo dirto cinwaanka IP ee wakiil ah, halkii aad cinwaanka IP dhabta ah.
Isticmaalaha xariga wakiilka - tani waa xarig ah oo u gaar ah browser ah in aad la isticmaalayo. Iyada oo ku saleysan xariggan, qof ayaa ogaan kara haddii aad isticmaasho tusaale ahaan version ugu dambeeyay ee Internet Explorer ama haddii kale. Intaa waxaa dheer, oo ay weheliyaan aqoonsiga aqoonsiga browser, faahfaahinta kale waxaa laga yaabaa in loo soo diro sidoo kale, oo ay ku jiraan nidaamka hawlgalka, URL ee bogga aad hore u booqatay iwm.
Kukiyada - Kuwani waa xadhig lagu badbaadiyey boggayaga internetka ee qalabkaaga kaydinta maxaliga ah. Waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelato browserkaaga si aad u diiddo helitaanka cookies, ama inaad weydiiso oggolaanshahaaga hawlgal kasta oo cookie la xiriira. Kukiyada waxaa ugu horrayn loo isticmaalaa si ay u caawiyaan dadka isticmaala by autodhamaystirka macluumaadka aqoonsiga iyaga, ama si loo xasuusto user ay booqasho ku xigta ee website-ka.
Ciyaaraha.org ururiya, qayb ahaan ama gebi ahaanba, qaar ka mid ah ama dhammaan waxyaabaha kor ku xusan. Ujeedada ugu weyn ee ururinta kuwan waa in la abuuro xog tirakoob oo ku salaysan, taas oo naga caawinaysa inaan aqoonsano meelaha muhiimka ah ee la xidhiidha boggayaga (tusaale ahaan, meelaha caanka ah ama meelaha laga yaabo inay u baahan yihiin horumar).
Ujeedooyinka kale waxaa ka mid ah kuwa la xiriira ammaanka boggayaga iyo falanqaynta dadka. Sidoo kale, hay'adaha saddexaad waxay nala shaqeeyaan si ay u bixiyaan falanqeyn, xayeysiis la xiriira ama adeegyo kale oo loogu talagalay martidayada; hay'adahani waxay leeyihiin siyaasado u gaar ah oo ku saabsan asturnaanta iyo xog ururinta; waxaad si dadban u oggolaatay in siyaasadda hadda aysan khuseyn iyaga oo aad ogolaato in lagu xidho shuruudahooda iyo siyaasadahooda marka la eego macluumaadka ay labada dhinac saddexaad ku ururiyaan iyaga u gaar ah. Waxaad ka dooran kartaa cookies loo isticmaalo ujeedooyinka xayeysiiska dabeecadda ee tiro badan oo ka mid ah iibiyeyaasha saddexaad adoo booqanaya bogga Xayeysiiska ee Initiativeopt-out.
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aan codsan cinwaanka emailkaaga ujeedooyinka aqoonsiga, ama hawlaha xiriirka la xiriira. Waxaan leenahay siyaasad eber-dulqaad ah oo ka dhan ah spam, waxaanan u leenahay inaan qaadno tallaabooyinka ku habboon ee ka dhanka ah dadka isticmaala ee ku xadgudba xarumaheena ama adeegyadayada si kor loogu qaado, loo dhiirigeliyo ama dhab ahaan u soo diro fariimaha emailka
Waxaan xaq u leenahay inaad bedesho siyaasaddan waqti kasta, leh ama aan lahayn ogeysiis.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama fikrado ah oo ku saabsan arimahaaga gaarka ah ama ku saabsan shuruudaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto. Waxaan u xiiseyneynaa inaan maqlo talooyinkaaga.
Ku noqo bogga ugu muhiimsan